Nagu saabsan | GARGAARKA ROYI ART
Rinjiyeynta farshaxan gacmeedka
Xusuus-qorka casriga ah
Caddaan & Madoow
Sawirka Sawirka Sawirka
Dhismaha Qalabka Dhirta
Waraaq gacmeed xariir ah
Muuqaalka 'ROYI ART' waa rugta kaliya ee loogu talo galay dadka jecel farshaxanimada internetka ee raadinaya sawirka farshaxanka ugu fiican ee qiimahoodu jaban yahay.
Maamulahayaga Alizee wuxuu madax ka yahay ROYI ART gallery dibada wax ku iibinta, iyadu waa Art Lover sidoo kale. 10-kii sano ee la soo dhaafay, Alizee wuxuu si dhow ula shaqeeyey naqshadeeye gudaha, naqshadeeye, farshaxan, farshaxanle iwm… inbadan oo aan la shaqeyno, ayaa waxaan dareemeynaa inaan sifiican wax ugu qaban karno. Waxa intaa dheer, inta badan farshaxanadeena farshaxanimada waxay ku xeel dheer yihiin maadooyinka qaarkood ama farsamooyinka, waxaan abuurnaa & madadaalo, midab kasta oo farshaxan si taxadar leh oo tartiib ah u rinjiyee. Waxaan ku kobcinaynaa ganacsigeenna Soocelinta.
Sawir-gacmeed kasta oo ku yaal Royi Art waxaa gacanta lagu sawiray shiraac xirfad leh.
Iyada oo la adeegsanayo Royi Art waxaad toos uga iibsaneysaa istuudiyaha, abuurayaasha, naqshadeeyayaasha iyo farshaxanada.
Waxaan soo aruurinay kumanaan sawir gacmeed saliid ah oo dunida ka sameysan, kuwaas oo ka kala socda Yurub Masterpieces illaa Farshaxanka casriga ee casriga ah.
Saliida Dhabta ah, Dabada dhabta ah, Farshaxanada dhabta ah, Farshaxanka dhabta ah
Macaamiisha qaar ayaa weydiiyay sida ay u egyihiin inta udhaxeysa xarkaalka asalka ah ee muujinaya qadka tooska ah iyo qeybta dib loo celiyay
Waxaan jeclaan lahaa inaan idhaahdo ballanqaad kama heli doontid inaad heli doontid Aqoonsiga mid ka mid ah sida aad ka aragtid bartayada websaydhka sababta oo ah daabacaadaha farshaxanka kaliya ayaa u QAADAN KARO sida asalka ah.
Dhamaan farshaxannadayada ayaa gacanta lagu sawiray sidaa daraadeed bur-burin kasta ayaa laga yaabaa inay ka duwanaan karto. Waxaan ballan qaadeynaa inaad ka heli doonto isla tayo iyo qurux.
XANUUN SALIID / XANUUN ACRYLIC / Kansar
Waxaan ku faanaynaa nafsaddaada inaan bixinno wax uun mooyee oo ah tayada ugu sareysa farshaxanka.
Rinjiye kasta oo ay sameeyeen farshaxanadeena farshaxannada ayaa gacanta lagu dhajiyaa iyada oo la adeegsanayo qalabka ugu fiican ee la heli karo. Tani waxay xaqiijineysaa cimri dhererkaaga iyo tayada xafidaada rinjigaaga.
Farshaxannadeena ayaa doorta inay isticmaalaan midabyada loo yaqaan 'Blox Artist oil Colors'. Shan jiil oo farmashiistayaal ah oo ka tirsan qoyska Blockx waxay shaqeynayeen ilaa 1865 si ay u dhammeystiraan midabka loo yaqaan 'Blox oil Colors'
Rinjiga loo yaqaan 'acrylic paint' waa rinji si dhakhso ah u qallajiya oo ay ku jiraan xannibaadda midabka midabka leh ee 'emryion' polymer emulsion. Waa biyo-biyo-qaba, laakiin noqo biyo u adkaysta markay qallalan tahay. Waxay kuxirantahay inta rinjiga lagu qasi karo biyo, ama lagu badalay muruqyada acrylic, media, ama pastes, rinjiyeynta acrylic ee dhameysatay waxay u ekaan kartaa biyo qabatin ama rinjiyeyn saliid, ama waxay leedahay astaamo u gaar ah oo aan lagu heli karin warbaahinta kale.
KHARASHKA / XUQUUQDA IN TUBE / FRAMED
Tayada dhoofintaadu waa mudnaanteena iyo agabyada aan u isticmaalno xirmada alaabadayada waxay ka turjumaysaa go'aankeena.
Kalsooni ku qabo, haddii dalabkaagu uu ka kooban yahay alaabooyin isku dhafan, waxay si gooni gooni ah ugu rarri doonaan baakadaha ku habboon, lagumana soo dallaci doono maraakiib kale.
Rinjiyeynta aan lahayn xargaha waxaa lagu daboolan doonaa dhowr nooc oo kaydinta varnishes, oo lagu daboolayo xaashi difaac iyo filim, ka dibna si taxaddar leh loogu duubay tuubada waarta.
Rinjiyeynta xargaha leh ayaa kuxiran kartoonno leh xirmooyin xumbada leh iyo afar xagal ayaa si fiican loo ilaalin doonaa haddii ay jirto halis gaadiid.
Kooxda u go'ay inay la kulmaan baahiyahaaga
La-talin farshaxan bilaash ah iyo xigashooyin rasmi ah.
Dhakhso u jeesasho wareeg ah, ayaa loo diray caalamka oo dhan.
100% dammaanad qaad qancin.
Waxaan soo gudbineynaa heer adeeg heer sare ah oo joogto ah.
Waxaan aaminsanahay in codsi kastaa oo ka yimaada macmiilka inuu yahay fursad lagu dhisaayo xiriir muhiim ah.
Soo dhowow fikradaha cusub iyo ra'yi-celinta, oo kor u qaad adeegyadeena si ay uga bataan baahida macaamiisheena.
Xuquuqda daabacaadda @ 2020 Royi Art Gallery. Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay Featured Products , Sitemap , Mobile Site
Rinjiyeynta Oil , Contemporary Oil rinjiyeynta , Baararka bareelo , aan la taaban karin Oil rinjiyeynta , Handmade Oil Rinjiyeynta , Oil rinjiyeynta On mataleysay , Dhammaan Alaabada